Markaan Madaxwaynaha Ahaa! | Doodwadaag waa Danwadaag.
Saxansaxada socdaalkiisu marka u horraysa dugsiga ayay nagu soo gaadhaa. Annaga oo hoos iskula faqayna “tolow berri dugsigu ma jiraa?” ayaa barayaashayadu hal mar ku dhwaaqaan “Berri Dugsigu waa fasax”. Markaasaa farxaddu foolashayada kasoo if-baxdaa.
Magaalada iyadu maalma ka hor bay saxansaxadaasi soo gaadheay. Waddooyinkii jajabnaa iyo kuwii qashinka badnaa ayaa dhisme iyo dhalaalin loogu dhaqaaqay. Caruurnimadu waa cajiib. Maalin ciideed maahan balse ciid oo idil nooga farxad badan.
Subax habeenkeedu dheeraa ka dib, barqadii markay tahay ayaanu socdaal dheer galnaa. Hooyo kula hadlaysa iyo habar kugu qaylinaysa midna malahan oo dadkoo idili waa heegan iyo hayaan. Waxaanu rabnaa inaanu kaga hortagno waddada horee laga soo galo magaalada. Ama gaari raac ama adu isgaraangari, kollay kii gaaraa tahay meeshaas. Dabaysha qaraxa sayrinaysa iyo qorraxda ku gubaysaba uma jeeddid. Waxaa suuragal ah inaad cago caddahay, amaba saad u lugaynaysay kabi intay kaa go’do aad mid gacan ku wadato midna jiidanayso.
Hooya luudaysa, caleema qoyan wadata oo tafta haysa ayaa I dhinac socota. Laftirkeedu miyir ma lahan. Waa lug iyana. Muuqeeda sare iyo keeda hoose isma lahan. Lugaheeda markaad aragto iyo tafaha jeexjeexan waxaad moodaysaa maantay oo dhan in ay baadiyihii Karin iyo qararkii karkaar lugaynaysay, wajigeedase farxadda iyo quruxda kamuuqata markaad aragto waxaad mooddaa inay Baariis dalxiis ku tahay. Meeshaanu kusoo ordaynay soo garnay. Sugnay oo saacado in kabadan sugnay. Saanu laamiga u taagannahay ayay baabuurtiisu hoon soo yeerisaa. “ Dhiid dhiiiidh” Markaasaanu saf galnaa.
Hooyadii maantay oo dhan lugaynaysay ee aan tabarba hadal u hayn sow ta dhinacaaga ka mashxaradday iyadoo aad mooddo in ay dadka ugu cod dheertahay. “Soo dhowoow, soo dhowoow” sidaanu ugu hesayno ayaa gawaaridiisu hadba mid na baasaa oo boor iyo qiic baasiina nagu sayriyaa. Caruurnimadu waacajiibee, annagu tiris iyo far ku tilmaamid baanu ugu dhaqaaqnaa gawaarida. “Nacallaa, gawaari badanaa” sidaanu hadba mid farta ugu fiiqayno annaga oo faraxsan ayaa fatuuradda u danbaysa qiic nagu sii faniinisaa. Markaasaanu daba cararnaa annagoo caleemahayagii iyo calamadiiba lulayna. “soo dhoweeya, soo dhoweeya”. Siduu u socdo magaalada ayuu gala…, ama dhinaca kale ayuu uga baxaa oo magaalooyinkaa kale usii gudbaa.
Muuqaalkaasi sanadkii ama dhowrkii sanoba mar ayuu noo muuqan jiray. Madaxweyna cusub hadduu yimaado ama kii sanadkii hore hadduu isagoo qaab kale ah soo laabto, annagu isma bedelno, Isla sidaas baanu heegan ugu geli jirnay, daal iyo diifi annaga oo naga muuqato ayaanu guryahayaga kusoo laaban jirnay. Nalama dilo, oo nalama canaanto. Oo waayo naloo dilayaa? Hooyo iyo aabbeba laftigooda dadkii na dhinac socday ayay ahaayeen, ama gaari ha saarnaadeen ama sidayada oo kale ha lugeyaan.
Aniga maalinkaas ayay billaabmatay riyadaydii madaxnimo iyo maamuus jacayl. Wax aan ku jeclaaday garanmayo aanan ahayn inaan ku hammiyay in qaabkaas oo kale lay maamuuso oo laygu mashaxarado. Macallinkeyga dugsiga iyo waalidiintayduba haddii ay I waydiiyaan riyadeyda ugu wayn, waxaan ku oran jiray “Inaan madaxwayne noqdo”. Waa gartay oo layma barin madaxnimo intay gaarsiisantahay aan ahayn intaan waddada ku arkay. Layma dhigin hoggaanku qiimuhuu leeyahay anigana qarannimo iyo hannaan dawladeed ma arag.
Maantay markuu ogaalkaygu kobcay oo garashadaydu siyaaddey waxaan ogaadey in madaxnimadu tahay mid ku qodobaysan wax qabad iyo daryeelid bulsho. Waxaan ogaadey in muuqaalkii waagaas ii muuqan jiray uu ahaa halyeey gacan ku samays ah uusan ahayn hoggaan lagu hammin karo noqoshadiisa.
Mudane madaxwayne, Inkastoo aysan jirin wax aad ii qabatay oo aan kaaga mahad celiyo balse waxaan illaawi Karin farxaddii dhalanteedka ahayd ee aad maalmahaas wejigayga ku sawiri jirtay. Waan kaaga mahadcelin taas.
Waxaan raalli gelin ka dalbanayaa qof walba oo aan dulmiyay intaan madaxnimada riyo ahaan ku hayay. Iga raalli ahow hooyadii aan jeclaystay inay mashxard igu soo dhowayso anoon waxba u qaban, waxnana u qaban doonin. Wiilka yaree aan sababta u noqday in uu maantay oo dhan gawaaridayda daba cararo illaa ay kabihiisu kala go’een, hooyadiisna aysan awoodin in ay kaba cusub u iibiso. Iga raalli ahow dhirtii magaalada qurxinaysay ee aan jeclaystay in ani daraaddey loo jaro ee maalintaas wixii ka danbeeyay qallashay.
Ilaahow adna ii danbi dhaaf oo iga cafi riyadaas aan dadkaaga iyo dabiicadada ku dulmiyay. Anna waxaan ballan kuqaaday saacaddan wixii laga billaabo inaan madaxnimoo idil iska casilo.
Qore: Cabdifataax Daahir Cilmi